ConnectLeader TopRung: Gam2 Sales Gamification iyo Qalab Maareynta Waxqabadka | Martech Zone
Khamiis, Juun 13, 2017 Khamiis, Juun 13, 2017 Douglas Karr
Tikniyoolajiyad dardargelinta iibka B2B hal abuure Ku Xidhnow Hogaamiyaha ayaa ku dhawaaqay helitaanka ay TopRung gamification iibka iyo qalab maaraynta waxqabadka. TopRung waxay isticmaashaa awooda tartanka kooxeed si ay isugu waafajiso, u korsato una dardar galiso howlaha iibka, sidoo kale wadida korsashada nidaamka iibinta iyo abuurista wada hadalo jiil badan oo horseed u noqda fursadaha dhuumaha. TopRung waxay isticmaashaa awooda tartanka kooxeed, isboorti iyo madadaalo:
Iswaafajin, korsado oo dardargeliso howlaha iibka
Wadada korsashada habka iibinta
Abuur wada hadallo jiil badan oo horseed u noqda fursadaha dhuumaha.
TopRung waxaa loo magacaabay a kama dambaysta ah Abaalmarinta BIG ee Ganacsiga ee alaabada cusub ee sanadka.
Waxaan u adeegsanaa TopRung si aan u xallino qayb muhiim ah oo muhiim ah oo ka mid ah geeddi-socodka iibkeenna - haynta wakiillada oo ku hawlan kuna dhiirrigeliya saldhig joogto ah iyo tartan yar oo saaxiibtinimo oo lagu dhisay. Katie Lawrence, CareerMinds VP ee Iibka
Isku-dheelitirka ConnectLeader wuxuu cunsur ahaanta aadanaha u leeyahay isboorti iyo madadaalo nidaamka hawlgalka ee nidaamyada iibka adag ee maanta
Ciyaaruhu had iyo jeer waxay ciyaartooyda ku mashquulinayaan sidii ay ugu tartami lahaayeen inay ku gaaraan himilooyin dhiirigelin, fikir hal abuur leh iyo isku xirnaan kooxeed. Iskuxidhka TopRung ee ConnectLeader wuxuu qaataa dhamaan xiisaha loolanka ciyaarta ku saleysan wuxuuna ku dhex daraa nidaamyada iibka casriga ah si kor loogu qaado khibrada iibinta iyo xiritaanka heshiiska. Senraj Soundar, Maamulaha Guud ee ConnectLeader
TopRung sidoo kale waxay ka faa'iideysaneysaa dhammaan walxaha caadiga ah ee ku saabsan xogta Salesforce iyo ConnectLeader, si ay si khaas ah ugu haboonaato aaladda ganacsi kasta oo ay u baahan tahay. Tilmaamo dheeraad ah waxaa ka mid ah:
Hirdanka - Isku aadinta asxaabta si loo go'aamiyo guuleystayaasha iyada oo sidoo kale caqabado laga dhex abuuro kooxaha iibka si loo go'aamiyo cidda ugu sareysa.
Honors - Abaal marin u diyaarinta iibka iyo waxqabadka adoo hoosta ka xariiqaya waxqabadka asxaabta, wada-shaqeynta iyo maamulka.
Notifications - Horusocodka hogaamiyaha tabinta ee TV Channel ama shaashad dulsaaran dabaqa iibka – oo leh heeso la habeyn karo iyo wargalin wargalin ah oo dabaaldegaya dhacdooyinka waaweyn.
Falanqaynta Xogta hodanka ah - Waxay u ogolaataa maareeyayaasha iibka inay ku wada hayaan dhammaan xogta waxqabadka iibka hal meel. Hawlaha iibka, natiijooyinka iyo horumarka ayaa la qabtay si loo siiyo maamulayaasha falanqaynta isbeddelka horumarsan iyo awoodda wax looga qabanayo ama kor loogu qaadayo dabeecadaha.
Ku saabsan ConnectLeader
Ku Xidhnow Hogaamiyaha waxay bixisaa tikniyoolajiyadaha dardargelinta iibka ee dhammaan noocyada doorka iibka si loo kordhiyo dakhligooda ugu sarreeya ee loo maro isgaarsiinta la dedejiyey, kharashyada la dhimay iyo ilaha suuqgeynta ee la wanaajiyey si ay u noqdaan kuwa aad u tayo badan. Barmaamijka Dardargalinta Iibinta Cilmiga leh ee ConnectLeader wuxuu siinayaa iibinta iyo kooxaha suuq geynta aalado awood leh si loo aqoonsado loona hawl galiyo rajooyinka iibka oo tayo sare leh waxaana ka mid ah xalalka isku xirnaanta iibka ee isku hagaajinta dhamaan noocyada iibka iyo kooxaha horumarinta ganacsiga. Tikniyoolajiyaddan cusub ee daruur ku saleysan waxaa lagu dhisay mashiinka sirdoonka xogta ee ConnectLeader Adaptilytics which kaas oo tilmaamaya oo mudnaanta siinaya liisaska wicitaanka dibadda ee hubinaya in hoggaamiyeyaashaada ugu wanaagsan marka hore lala xiriiro.
Tags: xirfad-yaqaantartankaiskuxirahaciyaarahakatie lawrencejiilka leddhuuntawaxqabadka iibkatartanka iibkaKordhinta Iibkaiibinta gamificationyoolalka iibkadhuumaha iibkatartanka kooxda iibkakooxaha iibkaiibinsenraj soundardusha
Netra Sirdoonka Muuqaalka: La soco Noocaaga Muuqaal ahaan Online